Baaritaanka caqabadaha guurka - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Guurka > Baaritaanka caqabadaha guurka
Guurka ka hor waa inaad qoraal ahaan ku codsataan baritaanka caqabadaha guurka (esteiden tutkiminen). Baaritaanka caqabadaha guurka waxaa lagu sameeyaa xafiiska diiwaangelinta (maistraatti). Codsiga qoraalka ah waxaa loo gudbin karaa xafiis kasta oo sameeyo diiwaangelinta dadweynaha. Baritaanka caqanaduhu waa bilaash.
Haddii uu idinka mid ka mid ah haysto diinta kiristanka ee evanjelis-luteran ama uu yahay xubin ka mid ah kaniisada ortodokiska, waa inaad baaritaanka caqabadaha sidoo kale ka samayso kaniisadaada.
Baaritaanka caqabaduhu waa qasab, baaritaan la'aan meher lama samayn karo. Baaritaanka caqabadaha waxaa tusaale ahaan ku cadaanaya, haddii labada qof mid ka mid ah uu qof kale wali ku mehersan yahay.
Dalka Finland baaritaanka caqabaduhu wuxuu qaataa qilaastii hal usbuuc. Shahaadada baaritaanku waxay shaqaynaysaa afar bilood. Haddii aan afarta bilood gudahooda meherka lagu samayn, waa in mar labaad la sameeyo codsiga baaritaanka caqabadaha. Shahaadada baaritaanka waa in la keeno goobta meherku ka dhacayo.
Ku imaanshada Finland xaas ahaan
Caqabadaha guurka waxaa loo baaraa si waafaqsan sharciga Finnishka, haddii aad tahay muwaadin Finnish ah ama aad dalka Finland si rasmi ah u degen tahay macluumaadkaagana laga heli karo xafiiska diiwaangelinta.
Haddii lamaanaha ajnabiga ah aan macluumaadkiisa laga hubsan karin nidaamka macluumaadka dadka, waa in uu rajistareeshinka uga keenaa cadeyn baaritaanka xannibka guurka dartiis saraakiisha dalkiisa. Tana waxaa haboon waqti la siiyo, sababtoo hab-socodka wadamadu way kala duwan yihiin. Macluumaad dheeraad oo ku saabsan cadeymaha la isaga baahanyahay waad weydiin kartaa rajistareeshinka.
Sidoo kale xaaska ajnabiga ah wuxuu u baahan yahay warqadaha aqoonsiga, shahaado ah xagga guurka ah (doob, wax furay/la furay, laga dhintay) iyo Shahaadada A-post. Shahaadada A-postigu waxay cadaynaysaa in dukumintiga uu bixiyey shaqaale xafiis dowladeed ay tahay mid uu bixiyey qof awood sharciyadeed u leh inuu bixiyo shahaadadaas.
Labada wadanba oo sixiixay heshiiska dawladaha ee Haag waxay leeyihiin qof awood u leh inuu bixiyo Shahaadada A-post. Liiska wadamada sixiixay heshiiska waxaa laga heli karaa ayadoo ingiriis ah bogagga heshiiska caalamiga ee Haag kuna salaysan xuquuqda qofka shakhsiga ah. Xasuuso in wadanka shahaadada soo saaraya uu dukumintiga saaro shaabada rasmiga ah oo xaqiijinaysa, taas oo ay tahay in la weydiisto wasaarada arrimaha dibada ee dalka shahaadada soo saaray, intaas waxaa dheer cadaynta safaarada Finland ee wadanka shahaadada soo saaray. Wixii warar dheeraad ah weydii safaarada wadankaaga.
Codsiga baaritaan caqabaha guurkaFinnish | Iswidish
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 11.04.2014 Boggan war-celin ka soo dir